Dagaal-Yarihii Adduunka ee 1977-dii (Ogaden War of 1977) | Voice Of Somalia
Dagaalka laga hadlaayaa waa dagaalkii 1977-dii dhexmaray Soomaaliya oo dhinac ahayd iyo isbahaysigii Itoobiya iyo xoogaggii Waabka Bariga ee Soofiyeedku hoggaaminaayay. Marka laga eego xagga dawladihii ka qeybgalay waxaa la oran karaa wuxuu ahaa dagaalkii adduunka. Marka laga eego xagga baaxadda, laguna dhereriyo dagaalladii waaweynaa ee adduunka wuxuu ahaa dagaal aan weynayn.
Dhinacyadii ka qeybgalay waxay dagaalkaas u arkeen siyaalo ka la duwan; Itoobiya waxay la ahayd in lagu soo duulay ayna difaacaysay midnimada iyo wadajirkii dalkeeda. Ururkii Midowga Afrika (OAU) waxay la ahayd in Soomaaliya gardaranayd kuna xadgudubtay Cahdigii Afrika ee lagu saxiixay Qaahira 1964-tii ee la is la gartay in xuduudihii gumaystuhu Afrika uga tagay sidoodii loo daayo. Sidoo kale dawladihii adduunku intooda badan oo ay ku jireen kuwii itaalka weynaa, waxay u arkeen in Soomaaliya ku duushay dal madaxbannaan oo xubin ka ahaa Qarammada Midoobay.
Soomaaliya waxay la ahayd in gobolkii Soomaali Galbeed (Ogaden) ee colaadda saldhigga u ahaa aan lagu dhaqi karin xeerarkii lagu dhaqay xuduudihii ay gumeystayaashu ka tageen, sababtoo ahayd.
1- Inaysan Itoobiya xilliyada laga hadlaayo ahayn dawlad sidii Afrikaanka kale la gumeysanaayay ee ahayd iyada lafteedu mid wax la qeybsatay xoogaggii reer Yurub ee boobayay Afrika, sidaas darteedna iyada lagu fiiriyii indhihii lagu eegaayay gumaystayaashii Afrika ka la qeybsaday.
2- In Boqortooyadii Ingisriika ee gacanta ku haysay dhulalkii Soomaaliyeed ee ay markii dambe ku wareejisay Itoobiya ay hore u la lahayd qolooyinkii Soomaaliyeed heshiisyo maxmiyadeed, kuwaasoo dhigaayay in Ingiriisku ka difaaco xoogaggii hungurinaynaayay Soomaalida iyo dhulalkeeda.
3- Inaysan Soomaalidu ahayn sidii Afrikaanka kale qoomiyado isu tagay oo sidaas dawlado ku samaystay/loo sameeyay, ee ay tahay hal qawmiyad oo wax walba wadaagta, sidaas darteedna, aysan daw ahayn in la ka la qoqobo qoysas wada dhashay.
4- Inaan haba yaraatee dadweynihii Soomaaliyeed laga la tashan siyaalihii isaga iyo dalkiisa loo moqooraday.
5- In Itoobiya ku la dhaqantay Gobolkii Soomaali Galbeed (Ogaden) hababkii gumeysiga, iyadoo ka dhawrtay dhinacyadii horumarka oo idil iyo iyadoo cadaadis xooggan saartay dadweynihii, dilka, dhaca, kufsiga iyo xabsiguna u noqdeen joogto. Arrimahaasi waxay keeneen in dadkii gobolku u qaxo Jumhuuriyaddii Soomaaliya, sidaasna culays ku fuulo maamulladii Jumhuuriyadda.
Waxaa kamid ahaa heshiisyadii lagu maqooraday gobolka
b. Heshiisyadii Ingiriis iyo Talyaani ee 1891-dii
t. Heshiisyadii Ingiriis iyo Talyaani ee 1894-tii
j. Cahdigii Faransiiska iyo Itoobiya ee 1897-dii
x. Cahdigii Talyaaniga iyo Itoobiya ee 1908-dii
d. Heshiiskii Ingiriiska iyo Itoobiya ee 1954-tii
Awooddii Ciidan ee Labada Dal Dagaalka Kahor
48,000 Askari 22, 000 Askari
1 Qeyb oo Makaanik ah 6 Urur oo Taangiga
3 Qeybood oo Ciidanka Dhulka 9 Urur oo Makaanik ah
1 Urur oo Dalladaha ku Booda 5 Urur oo Ciidanka Dhulka
3 Urur oo Madaafiicda 4 Urur oo Soomajeesta-yaala
2 Urur oo Injineerro ah 6 Urur oo Madaafiicda Goobta iyo 5 urur oo Xagga Cirka
4 Cutub oo Gaashaaman,
(M 41 Lt, M 113 APCs, AML 240/60) 7 Urur oo Gaashaaman ( T 34, 50,
54, 55, BTR40 & 152 APCs)
36 Diyaaradaha Dagaal ee C. Cirka 66 Diyaarada Dagaal ee C. Cirka
1 Cutub oo Bambarro ah 1 Cutub Bambarro ah
3 Cutub oo Diy. Dagaal-yahanna 1 Cutub Diy. Dagaal-yahanna
1 Cutub oo Diy. Ilaala 2 Cutub oo Dagaalyahanno weerar ah
3 Cutub oo Diy. Xammuulka 1 Cutub oo Diy. Xammuulka
1 Cutub oo Helikobtarro ah 1 Cutub oo Helikobtarro ah
Dhawr Doonyood oo Kuwa
Wax Ilaaleeya Dhawr Doonyood oo Kuwa Wax Ilaaleeya
Soomaaliya waxay 15-kii sanoo ka horreeyay dagaalka dhistay Ciidankii Xoogga Dalka Soomaaliyeed (XDS), waxaase wax walba ka weynaa niyaddii ciidammada oo aad u sarreysay, iyagoo u arkaayay inay dal iyo dad Soomaaliyeed oo la gumeysto xoreynaayaan.
Intaan si rismi ah dagaalku u bilaabmin, waxay Jabhadii Soomaali Galbeed (WSLF) wadday intii muddo ah dagaallo dhumaalaysi ahaa, waxayna ciidammadii jabhaddu gooyeen waddooyinkii gobolka sida, waddadii tareenka ee isku xiraysay Dirirdhabe iyo Jubuuti oo halbowle u ahayd Itoobiya, waxayna jabhaddii la wareegtay inta badan dhulalkii miyiga. Sidaas darteed, waxay jabhaddii wiiqday awooddii ciidan ee Itoobiya.
Weerarkii weynaa ee ciidammadii Soomaaliya wuxuu bilaabmay 23-kii bishii 7aad, 1977-dii. Wuxuu ahaa weerar si fiican u qorshaysan, waxaana la adeegsaday tabta dagaalka ee loo yaqaan “Blitzgrieg” oo ahayd tab ay dunida ku soo kordhiyeen ciidammadii Jarmalku waayihii uu socday Dagaal Weynihii Labaad ee Adduunku. Tabtaasi waxay ahayd in ciidan xoog badan oo xawli ku socda lagu weeraro goobihii loo dan lahaa, iyadoo dhinacyada laga maraayo ciidammada difaaca uga jira jiidaha hore, kadibna lagu go’doomiyo goobahooda, iyadoo laga jaraayo waddooyinka sahayda iyo gurmadyada. Tabtaas bay meelmariyeen hoggaamiyaashii ciidammada Soomaaliya 1977-dii, waxayna inta badan awooddii ciidan ee Itoobiya ee ku sugnayd Gobolkii Soomaali Galbeed ka dhigeen midaan wax tari karin, waxayna noqdeen wax is dhiiba, wax la dilo iyo wax si habqana u baxsada. Muddo kooban oo lagu qiyaasay 2 bilood buu X.D.S la wareegay ¾ dhulkuu u dagaallamaayay, waxaana u harsanaa kaliya Harar iyo Dirirdhabe oo uu hareereeyay, gulufyana u diray gudaha magaalooyinkaas.
In kastoo muddo kooban lagu jabiyay ciidankii Itoobiya, awooddiisuna noqotay maalmahaas midaan is difaaci karin, haddana waxaa jiray arrimo Soomaalida xannibaayay:
1- Gaadiidkii dhulka ee Soofiyeedka oo XDS adeegsanaayay ayaa ku habboonaan waayay abuurtii dhulkii lagu dagaallamaayay iyo xilli-roobeedkii oo keenay dhiriq hakisay xawligii dh/dhaqaayada.
2- Saanaddii madaafiicda iyo gawaarida gaashaaman ee aagga Harar iyo Dirirdhabe oo yaraatay.
3- Soofiyeedkii oo diiday agabkii ciidammada Soomaaliya uu siin jiray, una wareegay dhanka Itoobiya oo uu taageero ciidan oo baaxad leh la garab-istaagay.
4- Soomaalida oo awoodi wayday inay si fiican u dayactiraan qalabkay haysteen, taas oo kamid ahayd cilladihii horjoogsaday inay dhammaystiraan guulihii degdegta ahaa ee ay gaareen.
5- Diyaaradihii dagaalka ee Itoobiya oo awooday inay carqaladeeyaan waddooyinkii sahayda XDS.
Maadaama, dagaal u baahan yahay dhaqaale xoog leh iyo tiro badan oo dada, wuxuu abbaanduulkii Soomaalidu qorsheeyay inuusan Dagaalkii Soomaali Galbeed noqon dagaal daba dheeraada “attrition war”. Haddaba, caqabadihii ka horyimid XDS waxay keeneen hakasho aan lagu talagalin, taas oo fursad fiican u siisay Itoobiya inay ciidammo aruursato iyo inay qeylodhaan dirsato.
Si kastaba ha ahaatee, sida ay qireen saraakiishii sarsare ee Soofiyeedku wax kasta oo markaas Itoobiya la siiyo ma waabin karin weerarradii XDS. Sidaas darteed, wuxuu Soofiyeedku si degdeg ah u qaaday tillaabooyinkaan:
– 25kii bishii 11aad 1977-dii wuxuu Ciidankii Cirka Soofiyeedku sameeyay kaabad hawada sare taxan, isagoo hawlgeliyay ilaa 225 diyaaradood oo ah kuwa waaweyn ee xammuulka ciidammada qaada si ay u soo daadgureeyaan BM-21s, T-55 iyo T-62 MBTs, BMP-1 iyo BRDM APCs, madaafiicda 130mm, 155mm iyo 185mm, saanad iyo sahayda seddex qeybood oo ciidana. Diyaaradahaasi waxay ka soo kacayeen Tashkent, waxay soo marayeen Baqdaad, Cadan iyo Musawac, waxayna ku soo degayeen Addis Ababa.
– Waxaa ka loo jiray diyaarado intii laba toddobaada 20-kii daqiiqaba ku soo degayeen Addis Ababa, habeyn iyo maalinba, waxayna soo daadgureeyeen ilaa 15 kun oo ciidammo Kuubbaana, 2 kun oo Yementa Kuunfureeda, ilaa 1000 Jarmalkii Bariya iyo aalad ciidanoo tiro badnayd.
– Hoggaankii ciidammadii isbahaysiga waxaa loo dhiibay jeneraal Soofiyeeda oo ahaa Vasily Petrov, isagaana dagaalka hoggaaminaayay.
– Aaaladdii millateri ee lixaadka lahayd waxaa gacanta ku hayay kuna dagaallamaayay ciidammadii Kuubbaanka ahaa.
– Wadarta qiimaha aaladdii iyo saanaddii cirka iyo badda maalmahaas loo marshay Itoobiya, waxaa lagu qiyaasaa 1 bilyan oo doollar. Ciidammadii Faransiiska ee Jubuuti fadhiyay baaba waxaa cabsi geliyay baaxaddii abaabulka ciidan ee Soofiyeedku sameeyay, sidaas darteedna, waxay diyaariyeen markabkoodii diyaarada xambaarka ahaa ee Clemanceau.
Is la maalmihiiba waxaa la bilaabay weerarro lagu soo qaadaayo aagaggii ciidammadii Soomaalida. Waxay diyaaradihii Helikobtarrada ahaa ee Mi-6 Hook soo daadgureeyeen taagiyada BMD ee fudfudud iyo ciidammo Kuubbaan iyo Itoobiyaana, waxayna ku soo daadsheen Jinacsaney oo 15 mayl xagga waqooyiga ka xigta magaalada Istaraatiijiga ee Jigjiga, halkaas oo ahayd gadaasha dambee ciidammadii Soomaalida ee difaaca ku jiray.
Soomaalidu waxay filayeen weerar xagga dhulka oo uga yimaada dhanka Dirirdhabe, sidaas darteedna, waxay difaac adag dhigeen dhinaca waqooyi ee buurta Garabcase, waxaa markaas Soomaalida u suurtoobi weyday inay si degdeg uga hortagaan ciidammadii dhabarkooda lagu soo daadshay. Haddaba, waxay ciidammadii xoogganaa ee gadaasha xooggii Soomaalida laga dhigay u suurtowday inay qabasadaan Jigjiga bishii 3aad 5-teedii 1978-dii. Markaas kadib, waxay madaafiicdii Soofiyeedka iyo Kuubbaankii si aada u garaaceen meelihii xoogaggii Soomaalidu uga sugnaayeen buurta Kaaraa-Mardha, kadibna, waxaa weerarro xooggan qaaday malleeshiyaadkii Itoobiyaanka ahaa, si Soomaalida rasaasta looga dhammeeyo.
Markay caddaatay in awooddii ciidan ee Isbahaysigii Warsow uu la dagaallamaayo Soomaaliya, Maraykankiina diiday inuu Soomaaliya siiyo hub ku filan, waxay dawladdii Soomaaliyeed go’aansatay inay ka baxdo Gobolkii Soomaali Galbeed (Ogaden).
Casharradii laga bartay Dagaalka:
– Waxay maalmahaas la ahayd Itoobiya inay guulaysatay oo dhammaysay arrintii gobolkii la isku hayay, laakiin sidaas ma noqon ee Jabhaddii Soomaali Galbeed baa dagaalkii sii wadday, ilaa maantadaan la joogana halkgaankii dadweynihii gobolku sidii buu u socdaa. Sidaas darteed, xoogaggii gurmadka ugu yimid Itoobiya guul kamadambaysa u ma soo hoyne, maalintaas uun bay madaxa ciidda uga cesheen.
– Dhanka Jumhuuriyaddii Soomaaliya waddaniyaddii ay ku madax adaygtay, waxay u keentay in dhinacyo badan oo adduunka ahi colaadshaan.
– Soomaalidu waxay qalad ka fahamtay wuxuu Soofiyeedku maagganaa, waxayna la noqotay inuusan si fudud uga tagayn danihii istaraatiijiga ahaa ee uu Soomaaliya ka lahaa, waxayna garan wayday in danta ugu weyn ee Soofiyeedku Afrika ka lahaa ay ahayd inuu kaliya ka ilaalsho aagga soogelitaanka reer galbeedka. Sidoo kale Soomaalidu waxay garan in Maraykanku in kastoo waayahaas Itoobiya ku biirtay waabka Reer Bariga, haddana uusan marna iyada ka doorbidayn Soomaaliya, sababo dadka intiisa badan fahmayaan awgood.
– Xoogaggii itaalka lahaa istaraatiijo ahaan waxay Soomaaliya ka doorbideen Itoobiya.
– Waxay Soomaalidu ku saxsanayd qorshihii ahaa in dagaalkaasu noqdo mid guulo degdeg ah keena, is la markaasna degdeg ku dhammaada.
– In xagga Soomaalida la qariyo arrimihii dagaalka maalmihii hore, waxay ahayd tab wanaagsan, laakiin waxay Soomaalidu gabtay in dagaalkii si dhoqso ah loo dhammeeyo kahor intaan ciidammadii shisheeyuhu soo cagadhigan, sidaasoo suurtogal ahayd, maadaama ciidankii Itoobiya si dhammaystiran loo jabiyay, kaliyana loo baahnaa in la xaaqo ama lays raaciyo. Hadday, sidaan dambe dhici lahayd, waxaa ku adkaan lahaa xoogaggii shisheeyaha hawlgallo dagaal oo degdeg ah inay sameeyaan.
– Diyaaradihii F-5 ee Itoobiya waxay carqaladeeyeen waddooyinkii sahayda, waxayna hakiyeen dhaqdhaqaaqyadii ciidammada. Arrintaas Soomaalidu tillaabo ku habboon ka ma qaadin, taasoo kamid noqotay cilladihii hakiyay xawligii hawlgallada. Halkaan waxaa laga fahmi karaa saamaynta diyaaraduhu yeelan karaan.
– Diyaaradihii Helikobtarrada ahaa ee Soofiyeedku keenay, kuna daadgureeyay ciidammada, taangiyada iyo aaladihii kale, baa ugu weynaa qodobbadii looga taagroonaaday Soomaalida, sidaas darteed, waxaa dagaalka Soomaaliya ku jabiyay awooddii baaxadda lahayd ee Soofiyeedku la yimid.
– Inaan ummadi waxay doonayso lagu hor istaagi karin, laguna baabi’in karin hubka ugu culus adduunka, laakiin guusheeda lagu hakin karo.
The OGADEN War: An analysis of its causes and its impact
on regional peace on the Horn of Africa.
Brigadier Joseph K. Nkaisserry
Colonel Daniel HenkProject Advisor.
Xasan Sheekh “Degaanka Soomaalido wuxuu ka tirsan yahay Ethiopia”